दुवै हात नभएका नायव सुब्बा भन्छन् ; गरिखान हातै चाहिन्छ र ? « The News Nepal
दुवै हात नभएका नायव सुब्बा भन्छन् ; गरिखान हातै चाहिन्छ र ?
काठमाडौं।कुहिनामुनि दुवै हात छैनन् । जन्मँदै दुवै हात थिएनन् । दुवै हात नभएको बच्चा जन्मेको थाहा पाएपछि गाउँभरि हल्लाखल्ला चल्यो । गाउँकै एक ठालुले यस्तो बच्चा जन्मनु राम्रो होइन, बाँचिहाले पनि यस्तो बच्चाले केही गर्न सक्दैन, सालनाल नकाटी कसैले नदेख्ने ठाउँमा फालिदिनू भन्ने प्रतिक्रिया दिए । आमाको मन न हो । त्यसो गर्न कहाँ सक्थिन् । कसैले फालिदेलान्, मारिदेलान् भन्ने डरले आमाले उनलाई काखमै च्यापेर हुर्काइन् ।
थाङ्का आर्टसम्बन्धी चार महिना तालिम गरेका उनले दुई कक्षा पढ्दासम्म खुट्टाले लेख्थे । विद्यालयमा बेन्च बसेर लेख्नुपर्ने बाध्यता भएपछि औंलाविहीन हातले लेख्न अभ्यास गरे । नभन्दै सफल भए । उनले औंलाविहीन हात र खुट्टाले लेख्ने र खानासमेत खान सक्छन् ।रातो पार्टी बाट साभार गरिएको हो।